Imizila yesitimela ehamba phambili eYurophu | Ukuhamba kwe-Absolut
Ngaphandle kokuthi indiza iseyizithuthi ezisetshenziswa kakhulu yiningi labantu, iqiniso ukuthi isitimela sikwazile ukuhamba kancane kancane ohambweni lokuhamba, ikakhulukazi eYurophu. Lokhu kuboniswa ngamaphasi wesitimela ahlukahlukene abelokhu evela, avumela ukuhamba phakathi kwamazwe ahlukene ngokukhululeka okukhulu. Ngakolunye uhlangothi, ukuhamba ngesitimela eYurophu akudingeki kubize, empeleni kungenzeka ukuthola ifayela le- usebenzelana kahle no-Omio futhi uqale i-adventure. Futhi ngukuthi amathuba ahlinzekwa yisitimela lapho usohambweni ahlukile, ethola izindawo ezinhle ezingenakwenzeka kwezinye izimo.
Kodwa-ke, ukuthola ubuhle bendawo ebabazekayo nezindleko zayo kwesinye isikhathi akushibhile izinzuzo zale ndlela yokuhamba kodwa inikeza induduzo enkulu lapho usohambweni futhi, ixhuma amadolobha amakhulu kakhulu. Lesi sakamuva siholela emizileni eminingi kulo lonke elaseYurophu, kuya ngokuthanda nezinto ezithandwa ngumhambi. Ngaphezu kwalokho, okuvame kakhulu kuvamise ukuba yilawo axhumanisa onhlokodolobha baseYurophu noma amadolobha athandwa kakhulu kuleli zwekazi, kepha kunabaningi futhi abakhetha imizila yezitimela ekuvumela ukuthi uhambe izwe elilodwa ngesikhathi esifushane futhi ungaphuthelwa lutho.
Phakathi kwale mizila, kunezinombolo ezimbalwa eziye zabaluleka uma kwenzeka sinquma ukuthatha uhambo ngesitimela sinqamula iYurophu. ESpain, enye yale mizila iyona ehambayo iTranscantábrico ujoyina iLeón noSantiago de Compostela. Phakathi nezinsuku eziyisishiyagalombili, kuvakashelwa amadolobha ahlukahlukene oGwini lwaseCantabrian, ajabulela amasiko nobuciko obuhle bendawo. EScotland enhle kunohambo olukhetheke kakhulu lwabathandi bensizwa esencane uHarry Potter. Ujantshi uxhuma iGlasgow neMallaig enikela ngamathafa anjengephupho lapho kugqame khona iGlenfinnan Viaduct edumile namachibi ase-Elit naseShiel.
EJalimane uzothola enye yezindlela ezindala kakhulu emhlabeni: ihlathi elimnyama. Lo mugqa uxhuma amadolobha ase-Offenburg naseConstance njengoba unqamula ingxenye yeHlathi Elimnyama elinomlingo, wenza izitobhi ezindaweni ezimangalisayo nasemizaneni emincane esezintabeni. Njengoba ulapha, akukubi ukugembula kumzila ohambayo amadolobha abaluleke kakhulu ezweni. Kepha uma sifuna umzila ongasoze ulibaleka, lowo wenziwa iBernina Express idlula eSwitzerland nase-Italy. Umzila uhamba ngemigudu engama-55, amabhuloho angu-196, idolobha elidala kunawo wonke eSwitzerland nasemadolobheni amancane ase-Italy Lombardy. Ubuhle bayo bunjalo ukuthi umzila umenyezelwe njengeNdawo yamaGugu Omhlaba ye-UNESCO.
IHolland ingelinye lamazwe anomzila wobuhle obukhulu, ikakhulukazi entwasahlobo. Ucingo I-Flower Route isuka eHaarlem iye eLeiden kudlula emasimini we-tulip amangalisayo anemibala ehlukene. Kodwa-ke, kulabo abafuna ukuhlala eduze nasekhaya, kuhlala kunokwenzeka ukukhetha ukubona onhlokodolobha abanjengoParis, London, Brussels noma iBerlin. Lokhu kukhulunywa kahle kakhulu komunye nomunye, ngakho-ke ukuhamba phakathi kwabo ngeke kube yinkinga. Ekugcineni, khumbula ukuthi le mizila ingenziwa nangaphandle kweYurophu, ukuhamba ngesitimela eJapan, isibonelo, ngamaphasi akhethekile ezwe ngalinye akuvumela ukuthi uzulazule izwe kalula futhi ngokushesha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Imizila emihle yezitimela eYurophu